Etu anyị si eji aka akwaga WordPress nrụnye | Martech Zone
Ọ ga-amasị gị iche na ịmegharị saịtị WordPress gị site na otu onye ọbịa gaa na nke ọzọ dị mfe, mana ọ nwere ike iwe iwe. Anyị na-enyere onye ahịa aka n’abalị ụnyaahụ nke kpebiri ịkwaga site na otu onye ọbịa gaa na nke ọzọ ma ọ gbanwere ngwa ngwa na nnọkọ nsogbu. Ha mere ihe ndị folks ga - eme - ha zipụrụ ntinye niile, bupu ọdụ data ahụ, bugharịa ya na sava ọhụrụ ma webata nchekwa data ahụ. Ma ọ mere ... oghere peeji.
Ihe bụ nsogbu bụ na emeghị ka ndị agha niile nwee ike. Ọtụtụ nwere nsụgharị dị iche iche nke Apache na modulu dị iche iche na-agba ọsọ. Fọdụ nwere ezigbo ihe nkwenye ikike na-akpata nsogbu na ibugo faịlụ, na-eme ka ha gụọ-naanị, na-ebute nsogbu bulite onyonyo. Ndị ọzọ nwere nsụgharị dị iche iche nke PHP na MySQL - nsogbu dị egwu na ụlọ ọrụ nnabata. Fọdụ nkwado ndabere na mpaghara gụnyere faịlụ zoro ezo nke na-ebibi ihe dị iche na nnabata dị iche iche n'ihi caching na redirection na sava ahụ.
Ma n'ezie, nke a anaghị agụnye faịlụ na-agaghị emeli. Nke ahụ bụ nke mbụ nke ma ọ bụrụ na ị nwere a sizable WordPress nwụnye… na nchekwa data faịlụ bụ nnọọ oke ibu bulite na mbubata site na a MySQL admin.
Enwere ụfọdụ ngwaọrụ dị ukwuu iji nyere aka, dịka CMS ka CMS. I nwekwara ike jiri nke Automattic VaultPress ọrụ - naanị ndabere saịtị ahụ, wụnye WordPress ọhụrụ na onye ọhụụ ọhụrụ, wụnye VaultPress ọzọ, wee weghachite saịtị ahụ. Ndị mmadụ a arụ ọrụ dị mma na-arụ ọrụ n'ọtụtụ nsogbu ị ga-abanye n'ime mgbe ị na-agbalị ịkwaga weebụsaịtị.
Agbanyeghị, anyị na-agakarị ịme ya naanị n'ihe ndị a ma, na-ewute anyị, na-emekarị ha n'onwe anyị. Ihe nrụnye ohuru na-amasị m mgbe m na-agafere onye ọbịa ọhụụ karịa ịdọrọ anyị nsogbu ọ bụla. Yabụ lee usoro anyị ji:
We ndabere dum nwụnye na saịtị ma budata ya na mpaghara maka nchekwa.
We bufee nchekwa data (anaghị etinye ya na nkwado ndabere na mpaghara) wee budata ya na mpaghara maka nchekwa.
We wụnye WordPress ohuru na ihe nkesa ọhụrụ ma nweta ya ma na-agba ọsọ.
We tinye plugins otu n’otu iji hụ na ha niile dakọtara ma na-arụ ọrụ. Fọdụ ndị mmepe mgbakwunye arụgoro ọrụ mara mma gụnyere itinye ntọala ha na ngwa mbupụ ma ọ bụ nye ntọala nke mbupụ na mbubata ntọala ha.
We bupu ọdịnaya site na saịtị dị ugbu a site na iji WordPress Mbupụ ngwá ọrụ wuru n'ime WordPress.
We bubata ọdịnaya ahụ gaa na saịtị ọhụrụ ahụ site na iji ngwa Mbubata WordPress wuru na WordPress. Nke a chọrọ ka ị gbakwunye ndị ọrụ… ntakịrị ọrụ ma ọ kwesịrị mgbalị.
We FTP folda wp-content / uploads ebe ihe niile anyị na faịlụ faịlụ anyị bara na ihe nkesa ọhụrụ ahụ, na-achọpụta ikikere faịlụ faịlụ nke ọma.
Anyị setịpụrụ permalinks ntọala.
We zipu isiokwu ma wụnye ya iji WordPress isiokwu installer.
Anyị na-eme ka isiokwu ahụ dị ndụ na wugharia menus.
We megharịa wijetị ma detuo / mado ọdịnaya dị ka ọ dị mkpa site na ochie na ihe nkesa ọhụrụ.
We iri ari na saịtị ahụ ịchọ nsogbu ọ bụla na faịlụ efu.
We jiri aka nyochaa peeji niile nke saịtị iji hụ na ihe niile na-adị mma.
Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, anyị ga melite anyị DNS ntọala igosi onye ohuru ohuru wee biri ndu.
Anyị ga-ejide n'aka na Gbochie ọnọdụ Nchọgharị na Ọgụgụ Ntọala nwere nkwarụ.
Anyị tinye nke ọ bụla CDN ma ọ bụ mkpuchi usoro e kwere ka onye ọhụụ ọhụrụ nweta saịtị ahụ iji mee ngwa ngwa. Oge ụfọdụ nke a bụ ngwa mgbakwunye, oge ndị ọzọ ọ bụ akụkụ nke ngwaọrụ onye ọbịa.
Anyị ga weghachite saịtị na Ngwaọrụ Webmasters iji hụ ma enwere nsogbu ọ bụla Google na - ahụ.
Anyị ga na-ochie usu gburugburu maka otu izu ma ọ bụ otú… dị ka ọ bụrụ na e nwere ụfọdụ ọdachi nke. Mgbe otu izu ma ọ bụ karịa na-arụ ọrụ nke ọma, anyị ga-gbanyụọ ụlọ ọrụ ochie ma mechie akaụntụ ahụ.
Tags: ndabere wordpresscms ka cmsesi akwaga WordPressakwagide WordPressbugharịa weebụsaịtịakpali WordPresstinyegharịa wordpressweghachite wordpressVaultPressWordPress ndaberewordpress weghachizip wordpress